Nwaafọ Naịjirịa bụ Onoriode George sonyere na ndị njem njem nlegharị anya n'Africa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Nwaafọ Naịjirịa bụ Onoriode George sonyere na ndị njem njem nlegharị anya n'Africa
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • ndị mmadụ • Mgbasa Ozi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị Africa Tourism Board (ATB) nwere obi ụtọ ịkpọsa nhọpụta Lucky Onoriode George nke Nigeria na Board. Ọ ga-eje ozi na Board dịka onye otu Board of Board of Private Sector Tourism Leaders.
Lucky Onoriode George nke Naijiria bụ onye mbipụta akwụkwọ na onye editọ nke African Travel Times Magazine, naanị otu ọnwa ndị ọdịda anyanwụ Afrịka na-eme njem na njem nleta. Ọ bụ ọkachamara na mgbasa ozi, ahịa, na mmekọrịta ọha na eze.
Ahụmịhe gara aga gụnyere ije ozi dị ka Onye isi nke Business Day Newspaper yana onye ngosi njem nleta na telivishọn, Ọ rụkwara ọrụ dị ka Director of Media for Abuja International Carnival na gọọmentị etiti nke Nigeria.
Lucky bụ onye bụbu onye otu Economic Community nke West African States (ECOWAS) Task-Force na Hotels, Motels, Inns na Tourist Guide Elabo nakwa onye bụbu onye ode akwụkwọ maka Federation of Tourism Associations of Nigeria (FTAN).
Ọ bụ naanị onye Naijiria meriri na European Commission Lorenzo Nalati maka ndị odeakụkọ na-akọ banyere ikike mmadụ na ọchịchị onye kwuo uche ya na 2006.